राप्रपा अध्यक्षमा नवनिर्वाचित राजेन्द्र लिङ्देन को हुन् ? यस्तो छ राजनीति इतिहास - ramechhapkhabar.com
राप्रपा अध्यक्षमा नवनिर्वाचित राजेन्द्र लिङ्देन को हुन् ? यस्तो छ राजनीति इतिहास
२०२२ साल भदौ २२ गते ताप्लेजुङको ढुङ्गेसाँघुमा जन्मिएका राजेन्द्र लिङ्देन झापाका स्थायी बासिन्दा हुन् । बुवा प्रहरीमा भएकाले उनको बसाइ भने झापा जिल्लामै भएको थियो ।
राजनीति शास्त्र र इतिहासमा स्नातकोत्तर गरेका लिङ्देनले २०३९ सालदेखि राजनीतिक यात्रा शुरु गरेका हुन् । राप्रपाको विद्यार्थी संगठन ‘राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संगठन’को संस्थापक अध्यक्ष समेत हुन्। लिङ्देनले २०४९ र २०५४ सालको चुनावमा झापाको गोलधापबाट वडाध्यक्ष जितेका थिए ।
२०६० सालमा जिल्ला विकास समिति झापाको सभापतिमा समेत बनेका लिङ्देन २०५६ सालको संसदीय चुनावमा झापा क्षेत्र नम्बर ३ मा तेस्रो र २०७० सालको चुनावमा दोस्रो मत ल्याएर पराजित भए ।
उनी नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलासँग पराजित हुँदै आएका थिए । उनै लिङ्देनले कांग्रेसका सिटौलालाई भारी मतान्तरले पराजित गर्दै २०७४ को प्रतिनिधिसभामा विजयी भएका थिए ।
समान्य परिवारमा जन्मेर पञ्चायती राजनीति हुँदै बहुदल आएपछि राप्रपाको राजनीतिमा लागेका झापाली नेता लिङदेनले प्रत्यक्षतर्फको जित दिलाएर राप्रपा पार्टीलाई शून्य सिटबाट जोगाएर वाहवाही पाएका थिए । लिङ्देन २०६४ सालमा राप्रपा नेपालको केन्द्रीय सदस्य भएका लिङ्देन २०७० सालमा राप्रपा नेपालको महामन्त्री भए ।
साभार : आजको अर्थ